Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်)
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Vasopressinသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည့် “ anti-diuretic hormone” ဟုခေါ်သော ဟော်မုန်းတမျိုးဖြစ်သည်။ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ ဟော်မုန်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိ pituitary ဂလင်းမှထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Vasopressin သည် ကျောက်ကပ်နှင့် သွေးကြောများအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
Vasopressin သည်ဆီးအသွားနည်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ထို့အပြင် Vasopressin သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ရေများပိုမို၍စုပ်ယူနိုင်စေရန် ကျောက်ကပ်ကိုအားပေးသည်။Vasopressin သည် သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန်ကိုတက်စေသည်။
pituitaryဂလင်းမှသဘာဝအလျောက်ထုတ်လုပ်သော ဟော်မုန်းတမျိုးချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော diabetes insipidus ဟုအမည်ရသည့် ရောဂါကိုကုသရန်အတွက်လည်း Vasopressin ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ထိုမျှသာမကသေး။ခွဲစိတ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်ဝမ်းဗိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်နေစဉ်အချိန်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အချို့သောအစာအိမ်ဝေဒနာများကိုကာကွယ်ကုသရန်လည်း Vasopressin ကိုအသုံးပြုနိုင်ပေသည်။
အထက်ပါအချက်များအပြင်အခြားသောအခြေအနေများတွင်လည်း Vasopressin ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Vasopressin ကိုအရေပြားအောက်ထိုးဆေးသို့မဟုတ်အသားထိုးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ကျွမ်းကျင်သူပုဂ္ဂိုလ်များကဤဆေးကိုထိုးပေးရမည်။ Vasopressin သည်အများအားဖြင့်၃နာရီခြားသို့မဟုတ်၎နာရီခြားတခါလိုအပ်သလိုထိုးပေးရသည်။သင့်ခန္တာကိုယ်၏ ဆေးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုကိုမူတည်၍ ဆေးတလုံးနှင့်တလုံးကြားအချိန်ကာလကွာခြားနိုင်သည်။Diabetes insipidus ကိုကုသရန်အတွက် Vasopressin ကိုနှာခေါင်းထဲသို့ ဖြန်းဆေးအဖြစ်သို့မဟုတ်အစက်ချဆေးအဖြစ်သို့မဟုတ် Vasopressin စွတ်ထားသောဂွမ်းစလေးကိုထည့်၍ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်။ဝမ်းဗိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ရန်အတွက်အသုံးပြုလျှင် Vasopressin ထိုးဆေးကိုဓာတ်မှန်မရိုက်မီ၂နာရီအလိုတွင်တခါ၊ဓာတ်မှန်မရိုက်မီနာရီဝက်အလိုတွင်တခါထိုးပေးလေ့ရှိသည်။ဝမ်းချူခြင်းကို Vasopressin ပထမဆေးတလုံးမထိုးမီ ပြုလုပ်ထားရမည်။ Vasopressin သည်ယာယီဘေးထွက်လက္ခဏာများဖြစ်သောပျို့ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အရေပြားကိုဖိလိုက်သောအခါထိုနေရာတွင် ဖြူသွားခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။Vasopressin ထိုးသည့်အခါတိုင်း ရေတခွက်နှစ်ခွက်သောက်ပေးခြင်းအားဖြင့်အထက်ပါဘေးထွက်လက္ခဏာများကိုသက်သာစေနိုင်မည်။Vasopressin အသုံးပြုနေစဉ်ကာလတွင်ရံဖန်ရံခါဆိုသလို သွေးစစ်ဆေးမှုများခံယူရန်လိုအပ်သည်။ထို့အပြင် ECGစက်ကိုအသုံးပြုကာနှလုံးကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေရမည်။Vasopressin ဖြင့်ကုသမှုခံယူနေစဉ်အချိန်အတွင်း သောက်ရမည့် ရေပမာဏကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့်အသေးစိတ်တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ရေကိုလိုအပ်သည်ထက်ပိုသောက်ခြင်းသည်လုံလောက်အောင်မသောက်ခြင်းကဲ့သို့ပင်အန္တရာယ်ရှိစေသည်။
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာအခန်းအပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Vasopressinကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Vasopressinကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Vasopressin ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Vasopressinကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းခြင်းတော့မပြုလုပ်ရပါ)
Vasopressinကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ Vasopressin ဆေးကိုသုံးစွဲတော့မည်ဆိုလျင် အောက်ပါအခြေအနေများကိုသတိထားသင့်သည်။
Vasopressin ဆေးနှင့်သို့မဟုတ်အခြားသောဆေးများနှင့်ဓာတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများခံစားရဖူးပါကဆရာဝန်ကို သေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမကအစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကိုတာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများပါအကျုံးဝင်သည်)။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါက ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
ကလေးငယ်များတွင် Vasopressin ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုံလောက်စွာသုတေသနပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ထို့ကြောင့် ဆေး၏အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုမသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Vasopressin ၏အသုံးဝင်မှု ဆေးစွမ်းကိုကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။သို့သော်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်နှလုံးရောဂါများ၊အသည်းရောဂါ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာစသည်တို့ရှိနေနိုင်သဖြင့် Vasopressin ဆေး၏ ဆေးပမာဏကိုဂရုတစိုက်ချိန်ဆရန်လိုအပ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ယခုဆေးဝါးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏သတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် ××× ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင်စိတ်ချရမှုရှိမရှိကိုမသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အချို့သောလူနာများတွင် Vasopressin၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုချက်ချင်းခံစားရနိုင်သည်။အကယ်၍သင်သည်ပျို့လာခြင်း၊အားနည်းသလိုခံစားမိလာခြင်း၊မူးလဲတော့မည်ဟုမှတ်ထင်ခြင်း၊ချွေးစေးများပျံလာခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း၊အသက်ရှုကြပ်လာခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်းတို့ကို ဆေးထိုးပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုခံစားလာရပါကသင်၏ဆရာဝန်ကိုအမြန်အသိပေးပါ။
• နှလုံးခုန် နှေးခြင်း၊မမှန်ခြင်း
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အဆိုပါရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းသည်လက်မောင်းနှင့်ပုခုံးသို့ပါ ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ပျို့ခြင်း၊ချွေးစေးများပြန်လာခြင်း၊နေ၍ထိုင်၍မကောင်းခြင်း။
• ဗိုက်အနည်းငယ် အောင့်ခြင်း၊နာခြင်း၊လေပွခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vasopressinဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင် Vasopressin ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ Vasopressin ကိုအသုံးမပြုတော့တာဘဲဖြစ်ဖြစ်သင်သုံးစွဲနေတဲ့အခြားဆေးတွေကို ပြောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကို ယေဘုယျအားဖြင့်Vasopressin နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်မူသုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို သောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါကသင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့် ဆေးတမျိုးသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံး၏ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသောက်ရမည့်အကြိမ်ရေကို ပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Vasopressinကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မလိုလားအပ်တဲ့ဓာတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vasopressinဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓာတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။ }အထူးသဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေများရှိနေခဲ့ရင် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချက်အလက်များသည် ဆေးပညာအကြံပေးမှုကို အစားထိုးရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ သင်သည်သင့်ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Diabetes insipidus ရောဂါအတွက်
စက်ဖြင့်ထိုးရသောအကြောဆေး :0.005units/kg/hr ; လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလိုနာရီဝက်ခြားစီ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆစီတင်ကာ 0.01units/kg/hr ရောက်သည်အထိထိုးနိုင်သည်။
Vasopressin ကိုနှာခေါင်းထဲသို့ ဖြန်းဆေး၊အစက်ချဆေး၊ Vasopressin စွတ်ထားသောဂွမ်းဖြင့်ဆို့ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ထိုသို့နှာခေါင်းထဲထည့်လျှင်အသုံးပြုရမည့် ဆေးပမာဏမှာလူတဦးနှင့်တဦးမတူညီနိုင်ပါ။
တမိနစ်လျှင်ဝ.၂ယူနစ်မှဝ.၄ယူနစ်အထိစက်ဖြင့်ဆက်တိုက်အကြောဆေးသွင်းထားရမည်။ထို့နောက် ဆေးပမာဏကိုလိုအပ်သလိုချိန်ညှိပါ (တမိနစ်လျှင်ဝ.၈ယူနစ်အများဆုံးနှုန်းဖြင့်)။အကယ်၍သွေးဆက်မထွက်တော့လျှင်သွင်းနေဆဲပမာဏအတိုင်း၁၂နာရီတိတိဆက်ပေးပါ။ထို့နောက်၂၄နာရီမှ၄၈နာရီအတွင်း ဆေးပမာဏကို
ကလေးတွေအတွက် Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Diabetes insipidus အတွက်
နောက်တနည်းမှာ Vasopressin ကို 0.0005 units/kg/hr နှုန်းဖြင့်အကြောဆေးသွင်းပေးနိုင်ပြီးဆီးနည်းစေရန် ဆေးပမာဏကိုချိန်ဆနိုင်သည်။
စ,စချင်းတွင် 0.002-0.005 units/kg/minute ကိုသွင်းပေးနိုင်ပြီးလိုအပ်သလို ဆေးပမာဏကိုချိန်ဆရမည်။(အများဆုံး 0.01 unis/kg/minute အထိသွင်းနိုင်သည်)
နောက်တနည်းမှာ 0.1 units/minမှစ,တင်ပြီး 0.05 unis/minute ခန့်စီထပ်မံ၍အများဆုံးပမာဏရောက်သည်အထိတိုးသွားနိုင်သည်။
၅နှစ်အောက်။။ 0.2 units/min
၅နှစ်မှ၁၂နှစ်။။ 0.3 units/min
၁၂နှစ်အထက်။။ 0.4 units/min
သွေးဆက်မထွက်တော့လျှင်လက်ရှိပေးနေသည့်နှုန်းအတိုင်း၁၂နာရီဆက်လက်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၂၄နာရီမှ၄၈နာရီအတွင်း ဆေးပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချကာ ဆေးကိုရပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေကျအသက်ကယ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပြုလုပ်ပြီးသည့်အပြင် adrenaline ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါထိုးပေးပြီးသည့်အချိန်တွင် Vasopressin 0.4 units/kgကိုအကြောဆေးထိုးပေးရမည်။လုံလောက်သော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမရှိသဖြင့်ကလေးငယ်များနှလုံးရပ်သွားသောအခါ Vasopressinကိုအသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ် ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်ကိုတိကျစွာလမ်းညွှန်ချက်မရှိပါ။
ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန်စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ဆေးဝါးမဆိုအသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အ၀နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Vasopressin (ဗေဆိုပရပ်ဆင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Vasopressinကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့်အချိုးအစားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုးဆေး 20 units/ml
Vasopressinကို သောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Vasopressin (Injection Route) http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/vasopressin-injection- route/proper-use/drg-20066681. Accessed July 15, 2016.
Vasopressin http://www.webmd.com/drugs/2/drug-16360/vasopressin-injection/details. Accessed July 15, 2016.
Vasopressin http://www.everydayhealth.com/drugs/vasopressin. Accessed July 15, 2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇှနျ 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 18, 2017
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း